Kukho isizathu sokuba oopopayi babeke iigloves kubalinganiswa babo abopopayi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iiklasikhi ezinkulu zepeyinti babenabancedisi kwimisebenzi ethile enzima ngakumbi, njengokuba yayinjalo, kwaye kunjalo, ukupeyinta okanye ukuzoba izandla zabalinganiswa abaziwayo kwezo mizobo zifumanekayo namhlanje zigcwele iigalari zeemyuziyam ezininzi zobugcisa kwihlabathi liphela.
Kwinkulungwane ephelileyo, oopopayi beWarner okanye iDisney, kuye kwafuneka balungise iindlela ezahlukeneyo zokwenza umsebenzi wokuzoba, esele inzima kwaye ibiza kakhulu kumzamo. Endaweni yokuba bangene kwiinkcukacha zokuzoba isandla, beza nazo nxiba iiglavu zikaMickey Mouse apho ukuququzelela umsebenzi wakho.
Ayizizo iiglavu zodwa, kodwa uninzi lwabalinganiswa abanomdla, njengeeJetson, Banxiba iihempe ezinekhola ebonakalayo. Isizathu soku siyafana neiglavu, iikhola zizinyo elincinane, kwaye endaweni yazo zinekhola, zavumela umzimba ukuba wohlulwe entanyeni ukuze yahlule intloko emzimbeni.
Ukuba singena kwezobuchwephesha, 'iikhathuni' zitsalwe kumaleko acace gca, kwaye nokuba kunjalo, ukukhanya kuyadlula kuzo, nto leyo eyenza ukuba inxenye yezo 'zinto ziphambili' zilahleke. Ukuqhubela phambili ungqimba luvela kumthombo wokukhanya, kuya kuba mnyama. Ke ukuba kuya kufuneka uzobe umzimba womlinganiswa kwilalele enye, kunye nentloko kwenye, ukukhanya akunakugqitha kuwo omabini la maleko, anokugqibela ngokuba nentloko emnyama ngakumbi kunomzimba wakhe.
Ngoku, masibeke intloko yakhe entanyeni, kwaye utshintsho lombala alunakubonwa. Ukuze oku kungabonakali kakhulu, abonwabisi bongeze ikhola yokwahlula intamo yentloko, kwaye ke umahluko wombala wawungabonakali kangako.
Ngamafutshane, izizathu zeigloves nezomqala zezi:
Umahluko ongcono kwixesha leebhulukhwe ezimnyama nezimhlophe
I-anthropomorphizing abalinganiswa abangabantu
Impembelelo ethathwe eVaudeville
Ungaphoswa lolu hlobo lobugcisa yoonobumba oopopayi kakuhle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Isizathu sokuba oopopayi banxibe abalinganiswa babo abathandekayo ngeiglavu kunye nezacholo zomqala